Ubethukile uBilliat eqala ukuhlaliswa isikhathi eside wukulimala - Impempe
Ubethukile uBilliat eqala ukuhlaliswa isikhathi eside wukulimala
Isilomo seKaizer Chiefs, uKhama Billiat sinaba ngobunzima ebesibhekane nabo kusukela siphuke onyaweni bebhekene neMaritzburg United koweDStv Premiership ngoJanuwari.
Uqalile ukuziqeqesha ngokugcwele njengoba bekunekhefu lemidlalo yamazwe uBilliat okukhomba ukuthi angase abonakale ngoMgqibelo emdlalweni kaGroup C kwiCAF Champions League la iChiefs izobhekana khona neWydad yaseMorocco.
Lo mdlalo use-FNB Stadium ngo 6 ntambama ngoMgqibelo. Kusukela aliqala ibhola elikhokhelayo uBilliat akakaze ahlale isikhathi eside kangaka ngenxa yokulimala.
Lokhu kushiwo uyena lo mdlali ekhuluma sakuzincengela isikimu kuGavin Hunt ngoMgqibelo.
“Ngiwumqemane! Asithembe ukuthi umqeqeshi uzonginika ithuba ngoMgqibelo. Okungijabulisa kakhulu ukuthi sengiziqeqesha nabanye ngokugcwele.
“Okusele nje ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngibuyisa ngokushesha ukuba fithi kwami. Konke kusemqondweni. Kumele ngikhuphule kakhulu ekuzikhandleni (ejimini) ukuze ngizothola ithuba lokusiza iqembu,” kusho yena.
Uthi kumethusile ukuthi ahlale isikhathi eside kanje engadlali ngoba bekuqala ukwenzeka kuye.
“Bekunzima impela. Esikuphilelayo thina singabadlali ukufaka isandla ekusizeni iqembu lakho ngaso sonke isikhathi. Uma kungenzeki lokho ngenxa yokulimala kuyawephula umoya.
“Kuliqiniso futhi ukuthi izikhathi ezifana nalezi engiphuma kuzo ziyasikhulisa njengabantu, hhayi njengabadlali kuphela.
“Ngesikhathi ngilimala sibhekene neMaritzburg bengingalindele ukuthi sekungaba into engihlalisa izinyanga ngingadlali. Angikaze ngibe sesimweni lapho ngeqiwa khona imidlalo eminingi kanje ngenxa yokulimala.
“Bekuyisikhathi esinzima impela kimi. Kusaqala bengizitshela ukuthi ngizosebenza kakhulu kusheshe kuphole kodwa kwangenzeka lokho.
“Ngigcine ngiphoqeleka ukuthi ngikwamukele ukuthi konke okwenzekayo kunesizathu sakho. Ngiyambonga uMdali ngokungipha amandla okuyiwona angenza ngizizwe ngiwumqemane futhi,” kusho uBilliat.
Mayelana neWydad uBilliat, uthe, kumele bazibambe ziqine ngoba usedlale nayo kaningi futhi ukuthi izobanizma yinto ecace bha.
“Abayishinsthi indlela abadlala ngayo. Umqansa ukudlala nabo ngoba konke okumele kwenziwe kwiChampions League bangompetha bakho.
“Konke lokhu kumele kusifake amandla nokuzethemba ukuze senze kangcono kunale ndlela esenze ngayo eBurkina Faso.”
Previous Previous post: UMagala uthi ukulungele ukudlalela amaProteas
Next Next post: SHWIII: Yizehluleki ezindala iSafa, yingakho neBafana injena nje